Xogtii u danbaysa waxay xaqiijisay horumar ay samaysay xaalada aadaminimo ee Soomaaliya. - Horseed Media
Xogtii u danbaysa waxay xaqiijisay horumar ay samaysay xaalada aadaminimo ee Soomaaliya. February 1, 2013 Share this:FacebookTwitterGoogleIsku dubaridaha aadaminimo wuxuu ka digayaa in la is mahadiyo iyadoo ay masiibada aadaminimo sii socoto.
Soomaaliya waxay ka mid tahay goobaha ugu caqabada iyo khatarta badan aduunka oo laga wado kaalmada aadaminimo. “ colaada iyo hakadyadu waxay caqabad ku yihiin galaangalka loo leeyahay dadka baahan taasoo adkaysay dadaalka caawimada. Laakiin galaangalku wuxuu usoo hagaagayaa si tartiib tartiib ah. Waan sii wadi doona in aan raacno hababkaas casriga ah si aan u gaarno dadka baahan sidii aan samaynay xiligii lagu guda jiray macaluusha, isla markaasna waxaan is bedel ku samayn doonaa habka guud ee ah in qarash lagu bixiyo jawaabta masiibo kasta oo cusub iyadoo maal gelin lagu samaynayo in la yareeyo” ayuu yiri porretti. Xogta ku saabsan sugnaanta xaalada cuntada waxay ku taal warbixin ay maanta soo saarta haya’ad falan qaysa xaalada sugnaanta cuntada iyo nafaqada oo ay maamusho haya’ada u qaabilsan qaramada midoobay beeraha iyo cuntada, iyo hay’ada digniinta hore ka bixisa macaluusha, warbixinta waxaad ka heli kartaa http://www.fsnau.org/.